Kubvunzana naEnrique Laso, nyeredzi munyori wenhau we2016 | Zvazvino Zvinyorwa
Diana Millan | | Hurukuro, Vanyori
Actualidad Literatura akawana mukana wekubvunzurudza Enrique Laso. Uyu murume anobva kuBadajoz akagara muMadrid, anoda kuverenga, cinema uye pamusoro pezvose kumhanya Ndiye mumwe wevanonyanya kubudirira vanyori veSpanish veiyi 2016.
Munyori weSaga raEthan Bush naFather Salas vanotipa mukana wekuziva kuti rwendo rwake rwave sei uye chii chinotevera 2017 chakamubatira.
Literature Nhau: Tiudze zvishoma Enrique ... Iyo bhaggi yakushandura iwe kuva munyori iwe wave kuoneka riinhi?
Enrique Lasso: Ndakatanga ndiri mudiki. Ane makore masere anga atopedza bhuku pfupi. Ndine chikwereti changu kunyanya kuna sekuru vangu, vakandisiira raibhurari yavo hombe uye vakandikurudzira kunyora nyaya.
AL: Icho chinhu chikuru. Uine raibhurari yauinayo iwe unofanirwa kuve uine kufanofungidzira. Ndeapi mabhuku iwe aungati akasiya akanyanya kufadza pauri?
THE: Zvakawanda. Pasina kupokana Iyo Magic Mountain, Denda, Mutambi, Bella del Señor kana El Túnel vakandimaka zvakanyanya, asi runyorwa rwakareba.
AL: Uye vanyori vako vaunofarira?
THE: Thomas Mann naDostoevsky. Ini ndakadanana ndiri wechidiki, uye zvinonetsa kutiza kubva ipapo.
AL: Makatiudza kuti pazera ramakore masere maitove neyenyu yekutanga yakapera pfupi inoverengeka. Unoyeuka here kuti yaive nyaya yako yekutanga?
THE: Nyaya yangu yekutanga kwete, nekuti yaizove makore matanhatu. Asi yangu yekutanga pfupi inova, yandakambotaura kare, hongu. Yainzi ROCK, uye yaive yemukomana akashanduka kuita dombo nekuti aisanzwisiswa nemunhu.
AL: Uye kubva ipapo, rwendo rwako semunyori rwange ruchive sei?
THE: Ndakahwina mibairo yekutanga kuchikoro. Gare gare muchikoro ndakaenderera. Saka kudzamara ndapihwa Mubairo weNyika weVadetembi vechidiki muna 1994, izvo zvakandikurudzira zvikuru. Waive mubairo wepamusoro uye wakapihwa mari kwazvo.
AL: Ehe idadiso huru kune jaya rezera iro. Parizvino, mangani mabhuku awakatoburitsa?
THE: Kana ndikaverenga mabhuku emabhuku uye ese mazita ekunyepedzera, anodarika zana nemakumi mashanu. Kana ndikataura zvemanoveli nemabhuku enhetembo, anodarika makumi mashanu.
AL: Uine akawanda mabhuku, iwe unofanirwa kuve nehumwe hunyengeri, chii kana ndiani waunowana kurudziro kubva paunonyora?
THE: Munhau kana zvinhu zvandinoona uye zvinoitika pamberi pemaziso angu. Bhuti rinogara riri chimwe chinhu chakavakirwa pachiitiko chaicho. Kubva ipapo fungidziro yangu inotanga. Dzimwe nguva zvakare kubva pakurota.
AL: Vanyori vazhinji vane zvido zvavo kana zvasvika pabasa.Une tsika here kana zvasvika pakunyora?
THE: Zvakawanda. Icho chinhu chingangoita chirwere. Ini ndinogara ndichitanga kabhuku katsva kebhuku rega rega, uye handizvitange kudzamara ndive nemusoro wenyaya, pepa rehurukuro, machira emhando, nezvimwe… Ndinofarira kuronga mangwanani uye kunyora masikati, kunyanya muzhizha. Hazvina kumboita husiku, nekuti ini ndoda kurara (ini ndinorara 9-10 maawa mazuva ese, kuverenga naps). Ini ndaigona kupedza yakawanda nguva ndichitaura nezveangu quirks, asi ini handidi kuridza zvisina kuenzana.
AL: Tiudze zvishoma nezve chiitiko ichi pawakaburitsa rako rekutanga basa.
THE: Eya, vekutanga vakabuda mune nhetembo kana nhetembo, nekuda kwemubairo waakahwina. Zvakandiitira kunyepedzera kukuru. Pandakazvizivisa pachedu mukuzvitsikisa-ndega ndakafunga kuti yaive nzira yekubuda nayo, uye kubvira ipapo ndatengesa anopfuura mazana manomwe ezviuru zvemabhuku, iri isiri diki feat. Ini ndakaburitsawo dzinoverengeka dzinoverengeka pabepa nevatsika tsika.
AL: Asi havazi vaparidzi chete vanofarira. Mamwe makambani ekugadzira akagogodzawo pasuo rako.Mangani emabhuku ako ane firimu inoenderana?
THE: Yakagadziridzwa, kuSpain uye nebhajeti diki, iri KUBVA KUGIHERO. Vamwe vaviri vane kodzero dzakatengeswa kumumiriri weHollywood: Runyerekupe RWEVAKAFA uye Mhosva DZEMAHARA. Mugadziri aifarira yekutanga, asi isu hatina kusvika chibvumirano nekuti vaida kuita shanduko zhinji kubhuku. Neyechipiri tanga tichitaurirana nemugadziri muhombe kweinopfuura gore. Idzi nziyo dzinoenda zvishoma, kunyanya kana mumwe munhu ari murume seni. Zvakare kambani yekugadzira yeSpain inofarira kugadzira akateedzana neiyo Ethan Bush saga.
AL: Ita kuti fungidziro yako imhanye. Ndiani waungade kutamba basa?
THE: Ndinoda kuti ave mutambi mukuru, semunyori chero upi zvake. Leonardo DiCaprio ndiye mutambi wangu wandinofarira nhasi, saka kana ndikagona kuwana hunyanzvi hwekusarudza wandinoda kuti Ethan Bush ave, angave iye, kunyangwe panyama vakasiyana kwazvo.
AL: Vamwe vanyori vanowanzoshanda pamwe nevamwe vanyori Wakamboshanda nemumwe munhu kana iwe ungade?
THE: Vanyori, vasina. Ndakabatana nevashanduri vazhinji, nekuti mabhuku angu anodudzirwa mumitauro yakawanda. Uye ini handidi kubatsirana nemumwe munhu. Vakandikurudzira, uye ini handina kuramba, asi kana vakasandidhonza, hachisi chinhu chinoita kuti ndifare zvakanyanya.
Ikozve kune emanyorero, asi irwo rumwe rudzi rwekubatana. Ikoko ndakaburitsa madhairekitori mazhinji akanyorwa mumawoko mana.
AL: Wakamboshandisa zita rekunyepedzera here?
THE: Ehe, chokwadi, ini ndinoshandisa kwete mashoma pane gumi nematanhatu mazita ekunyepedzera. Mazhinji emabhuku, kunyangwe mamwe akatsaurirwa kungano. Mumwe chete wandakaburitsa (nechisimba) ndiHenry Osal. Kune vamwe gumi nevaviri kuti vaende, uye ndinovimba hapana anombo sangana navo.
AL: Hatichazomanikidzazve ipapo. Bhuku rechishanu reEthan Bush Saga "Ndeipi Mweya Yakazorora?" Achangoburitswa. Kwakadii kugamuchirwa?
THE: Zvakanaka, kwayedza kuita ongororo, nekuti ichangobva kuvhurwa. Hongu pane chimwe chinhu chakanaka: vaverengi vari kutondibvunza chikamu chechitanhatu.
AL: Wako Fans Vangangodaro vanokoshesa mhinduro kumubvunzo uyu… Ndeapi mapurojekiti aunayo pamaoko ako?
THE: Ndine akati wandei e2017, emanyowani padivi. Chimwe chikamu che'El padre Salas ', chikamu chechitanhatu naEthan Bush - chinozoburitswa muchirimo uye chichatumidzwa zita rekuti RIMWE CHEMAZWI - muunganidzwa wenhetembo dzakanzi EPITAFIO uye neimwe rondedzero iripo: CATACLISMO.
AL: 2017 igore rinovimbisa mushe… Mubvunzo wekupedzisira, ungapa zano ani munhu ari kutanga kunyora?
THE: Verenga zvakawanda uye nyora zvakawanda. Izvo hazvizomborasa kunyepedzera uye nekutenda mune zvazvingaita. Ndakatanga kutengesa zvakati kurei pandakanga ndiine makore makumi matatu nemapfumbamwe, uye ndinogona kurarama ndichinyora kubvira ini ndaive nemakore makumi mana nemana - ndiko kuti, makore anodarika matatu apfuura-, saka iri ibasa redaro refu. Iwe hauzive kuti vaverengi vanokupa rini mufaro mukuru.
AL: Ndinokutendai zvikuru Enrique nekupa nguva yenyu kwatiri.
THE: Ndatenda kwazvo neiyi bvunzurudzo yakanaka.
Kubva kuActualidad Literatura, tinokurudzira zvakasimba kuti usarega gore richipera usina kuverenga chero yemanovel ake. Kufungisisa kwakavimbiswa.
Mufananidzo naEliciones Proust
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kubvunzana naEnrique Laso, nyeredzi munyori wenhau we2016
8 zvikonzero zvinyorwa zvekushanyira England mu2017